How To.. » ကောင်းကောင်းစားကြမယ် မြန်မာ့ရိုးရာအကြော်စုံ နဲ့ အချဉ်ရည်ကောင်းကောင်း	25
etone says: အယ် …. ရွာမလည်ဖစ်ဒဲ့ တောတွင်း …. ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ ချိလာတာ နာတို့ ရွာကြီး ….
ဒါ့ပုံဒေ ဘာဒေတောင် တင်လာရဲတဲ့ အထိပေါ့စ် … ဒါနဲ့ အာ့ ညီမယေးမို့ယား :P
အောင် မိုးသူ says: အရင် Office ကပါဗျာ။ ကျတော်က အဲ့လိုတွေ ချက်ကျွေးနေကြပါ။
အောင် မိုးသူ says: သူက ၀ိုင်းကူပေးတာလေ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ဖွေးဖွေးနဲ့ အတူတူ စားချင်လိုက်တာ… (အကြော် ကြော်ပြီး)
အောင် မိုးသူ says: ဖွေးဖွေးအရူးကတော့ ဆေးမမီတော့ဘူး
Yae Myae Tha Ninn says: မဆိုးဘူး… ခရစ္စမတ်နေ့အတွက် ဆွဲစိလိုက်ရ… ပဲခူးသွားမယ်ဆိုလို့ လွှတ်ပေးလိုက်မယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: အိမ်က သွားမှာမို့ လိုက်ကို လိုက်သွားရမှာ မလိုက်ရင် ဘီယာသောက်နေတယ်ထင်မှာ။ ခိခိ
Yae Myae Tha Ninn says: အဲလောက်ဆိုးလား… ကိုယ့်ဗိုက်ကိုတော့ မမှီသေးပါဘူးလေ… :P
kyeemite says: .အကြော်ဗန်းကြည့်ပြီး သွားရည်ကျသွားတယ်ဗျာ
အောင် မိုးသူ says: အဲ့အတိုင်းလုပ်မကောင်းရင် ကြိုက်သလိုသာလာပြော ဦးမိုက်ရေး)))
kai says: မြန်မာ့ရိုးရာတဲ့လား..။
ခင် ခ says: သဂျီး ပဲရွက်တို့ မြင်းခွာရွက် တို့လည်း မုန့်နှစ်နဲ့ ကပ်ပြီးကြော်တာမျိုးလဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။
kai says: ဂျပန်တွေရဲ့.. တန်ပူရာကတေ့ာ.. အရွက်တော်တော်များများကို.. ကြော်တယ်ဗျ..။
Ma Ma says: ဒီမှာလည်း သီးစုံတန်ပူရာဆိုပြီး စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတာရှိတယ်။
တစ်ခုကိုက်ရင် အရသာတမျိုးနဲ့ စားလို့ကောင်းသား။ Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: တန်ပူရာဆိုတာ မြန်မာအကြော်နဲ့ နီးနီးစပ်စပ်ပါပဲ သူပ မုန့်နှစ်ထဲမှာ နွားနို့ သို့မဟုတ် ထောပတ်ပါတယ်ဗျ။
မြစပဲရိုး says: ပုဇွန်စာရွက်ကြော်၊ ပိုးစာရွက်ကြော်။
အောင် မိုးသူ says: ပုစွန်စာရွက်တော့် အရမ်းကြိုက်တဲ့အရွက်ထဲမှာ ပါတယ်။ ဈေးထဲမှာလည်း ရှားပါးပြီး။ တစ်ခါတစ်လေ သူနဲ့ ဆင်တူတဲ့ အဖြူပွင့်တွေပွင့်တဲ့ အပင်တဲ့ လူတော်တော်များများက မှားကြသေးတယ်။ လမ်းမှာတွေ့လို့ ပုစွန်စာရွက်တွေ့ရင် မနေနိုင်ဘူး ခူးတော့တာပဲ။း)))
အောင် မိုးသူ says: မန္တလေးပဲကြော်လည်း ကျန်သေးတယ်။း)))
Iris says: စလုံး က Long John silver´s ကစားလို့မ​ကောင်းဘူး။ မြန်​မာအ​ကြော်​စုံကမှပိုစားလို့​ကောင်းတယ်​။ နာမည်​ကြီးတဲ့ ဗီယက်​နမ်​ ​ခေါက်​ဆွဲစားကြည့်​တာလည်းမ​ကောင်းဘူး။ ​ကြော်​ငြာ​ကောင်း​ကောင်းနဲ့ ပါဝင်​ပစည်း​တွေသန့်​ရှင်းမြင်​သာမှုရှိရင်​ မြန်​မာအစားအစာကို လက်​ခံကြမယ်​ထင်​တယ်​။
အ​ကြော်​​တွေအများကြီး ဗိုက်​ဆာ​နေတုန်းဖတ်​မိတာပဲ။ မတ်​ပဲဆိုတာဘယ်​လိုပဲလည်းမသိဘူး။ ​ရော​နှောပြီးသားအမှုန့်​​တွေ​ရောင်းရင်​​တော့​ကောင်းသား။ Ready Made. :-D
ဖားသက်ပြင်း says: ကျ​နော်​စားချင်​တဲ့အ​ကြော်​ က တမျိုးတည်းရယ်​
မြစပဲရိုး says: ဗိုက်ဆာနေပါတယ်ဆိုမှ။
အောင် မိုးသူ says: အရင်အလုပ်မှာလေ တစ်ပတ်တစ်ခါ စနေနေ့ နေ့လည်ဆို ကျတော်က တစ်ခုခု လုပ်ကျွေးတာ ။ အဲရုံးက မီးဖိုချောင်ရှိတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။ ကိုရီးယား ထမင်းလိပ်လုပ်နည်းလေး တင်ဦးမှပဲ။
ဦးဦးပါလေရာ says: ဆီသန့်နဲ့ကြော်တဲ့ အကြော်မျိုးစားချင်လွန်းလို့တပိုင်းသေနေတာ
အောင် မိုးသူ says: အချို့ အကြော်ဆိုင်တွေက သန့်ကြပါတယ်။ ဆီကတော့ စားအုန်ဆီပဲ သုံးမယ်ထင်တယ်။ လူများရင်တော့ တစ်ခါတစ်လေလုပ်စားတာ အကန်ုအကျသက်သာနဲ့ ကောင်းကောင်းစားရတာပေါ့။ ပင်ပန်းတာလေးတာ့ ရှိတယ်။